मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ९९ प्रतिशत बढ्यो - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ९९ प्रतिशत बढ्यो
३ असार २०७८, बिहीबार ०८:३० bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । पूँजीबजारको आकार र कारोबार बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखेर दिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) को वैशाखको तुलनामा चालू आवको वैशाखमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा वृद्धिदर ९९ दशमलव १९ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत आवको १० महीनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन प्रकृतिको कुल कर्जा रू. ९४ अर्ब ३४ करोड ४० लाख पुगेको छ । यो वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमार्पmत भएको कर्जा प्रवाह हो ।
गत आवको सोही अवधिमा मार्जिन प्रकृतिको यस्तो कर्जा रू. ४७ अर्ब ३६ करोड ५० लाख बराबर प्रवाह भएको थियो । यसपटक थप ४६ अर्ब ९७ करोड ९० लाख रुपैयाँले कर्जा प्रवाह भएको छ ।
वैशाखसम्मको कुल कर्जा प्रवाहमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अंश २ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । यसअवधिमा कुल कर्जा रू. ४० खर्ब ६१ अर्ब ४० करोड ५० लाख प्रवाह भएको छ । यसअवधिमा वाणिज्य बैंकको कर्जा वृद्धिदर ११४ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरूमा गत आवको वैशाखसम्म ३७ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएकोमा गत वैशाखमा रू. ८१ अर्ब ६१ करोड २० लाख पुगेको छ । वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंक देखिएको छ । ग्लोबलले यस शीर्षकको कर्जामा ७ अर्ब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ ।
इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश
काँग्रेसमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ४ लाख ४३ हजार क्रियाशील सदस्य थपिए ३ असार २०७८, बिहीबार ०८:३०
७० वर्षीय गन्धर्व १३ वर्षको उमेरदेखि सारङ्गी रेट्दै ३ असार २०७८, बिहीबार ०८:३०
कस्तुप र देवीको तीज गीत ‘तिम्रो फोटो आँखैमा’ ३ असार २०७८, बिहीबार ०८:३०
सोङ्गुकिपा ‘प्रेमनाथ’ डिजिटलकु खोईदउ जुर ३ असार २०७८, बिहीबार ०८:३०
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान अनलाइन आवेदन खुल्ला ३ असार २०७८, बिहीबार ०८:३०